လျှပ်စစ်ကွန်တိန်နာ Spreader၊ အပိုင်းအစ ကိုင်တွယ်စက်၊ Harbor Hopper - GBM
Rock Breaker Boom စနစ်
ကွန်တိန်နာ Rotary loader နှင့် unloader ပစ္စည်းများ
လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ် လိမ္မော်သီးအခွံကို ဖမ်းယူပါ။
Bulk Cargo Hopper စီးရီး
Movable hopper အမျိုးအစား
ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော hopper အမျိုးအစား
Balance Crane ၊
Stiff boom အဏ္ဏဝါကရိန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် GBM ဖြစ်သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆွဲချခြင်း၊ လွှင့်တင်ခြင်းအတွက် ဆိပ်ကမ်းကိရိယာနှင့် စိတ်ကြိုက်ရုပ်ကြွပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်လိုအပ်ချက်အရ ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအောင်မြင်ပြီး ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်မြင့်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသောအပြောင်းအလဲနှင့်နည်းပညာ၊ သံမဏိကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကွက်လပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပူကုသမှု၊ ဆေးသုတ်ခြင်းအထိ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် တင်းကျပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုထောင့်အားလုံးသည် လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အရည်အသွေးမြင့်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးပြကြီးတွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး GBM သည် ရှန်ဟိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နည်းပညာ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုထားပြီး "အရည်အသွေး" အမှတ်တံဆိပ်၏ သင်္ကေတတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။GBM သည် ဖောက်သည်ပရောဂျက်များအတွက် မတူညီသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အဓိကဘဏ်လေးခုနှင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် တံတားတစ်စင်းအဖြစ် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်လိုင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြွယ်ဝလာမှုနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ အရေအတွက်သည်လည်း တိုးများလာပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊ GBM သည် အရောင်း၏ရှေ့ဆုံးမှ "နည်းပညာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေ" နှင့် "ထုတ်ဝေမှုအစီအစဉ်"၊ ထုတ်လုပ်မှု၏ "အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း"၊ "ကောက်ခံခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း"၊ "ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အထိုင်ချထားခြင်း" နှင့် "ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ" အထိ လက်ခံမှု၏နောက်ဆုံး "တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့" "ရောင်းချပြီးနောက်ဌာန" သို့ပေးပို့ခြင်း။တည်ထောင်ထားသော ဌာနများအားလုံးသည် သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုသည် သင့်ဆိပ်ကမ်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေစည်းမျဉ်းရှိသည်- ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များတွင် အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကို ဘယ်သောအခါမှ အလျှော့မပေးပါ။
ဖယ်ရှားခြင်းဖြေရှင်းချက်- Grab+ Hopper + Belt Conveyor စနစ်
ဖယ်ရှားခြင်းဖြေရှင်းချက်- Harbor Crane + Spreader
အိတ်ထုတ်ဖြေရှင်းချက်- Grab + အိတ်ထည့်စက်
GBM သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ပင်မနည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် Port & Cement Extended Industry တွင် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။
GBM ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကရိန်းများ၊ ခုန်ပေါက်များ၊ ဖမ်း၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ အိတ်ဆွဲစက်များ၏ ဒီဇိုင်း၊ ပေးဝေမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲနည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အစုလိုက်ကုန်တင်ကုန်ချပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ .
တရုတ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ အရည်အသွေးမြင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စနစ်အား ပေါင်းစပ်၍ အမျိုးအစားခွဲခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးပါသည်။ GBM သည် အလုံးစုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ဆိပ်ကမ်းသို့ ကတိပြုပါသည်။ရှေ့ဆုံးဒီဇိုင်း;ဆောက်လုပ်ရေး ;ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များအတွက် စက်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏ “One-Stop Service” သည် သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်များကို ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်ဖြင့် ပြည့်မီစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ခေါ်ယူခြင်းမှ ခန့်အပ်ခြင်းအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖမ်းစားနိုင်သော စကားလုံးတစ်လုံးရှိသည်- ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ။ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမအဆင့်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆန္ဒများကို စေ့စေ့စပ်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။ ထို့နောက် သင့်အတွက် အဖြေပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များအပြင်၊ GBM သည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော 24 လ အခမဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လွန်ကဲသောအခြေအနေများတွင်ပင် သင့်အား ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။
ဒူဘိုင်းတွင် 4T@30M Crane တပ်ဆင်ခြင်း။
ဂမ်ဘီယာတွင် 50cbm Eco hopper
ORO ဘိလပ်မြေတွင် 30CBM Eco hopper
ဒူဘိုင်းသို့ အပြည့်အဝ ဟိုက်ဒရောလစ်ပြန့်နှံ့
ဖုန်း : 0086 18221720746
လိပ်စာ- SHANGHAI GUANBO MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD
© မူပိုင်ခွင့် - 2018-2021 : All Rights Reserved.
Marine Davit Crane ရောင်းရန်ရှိသည်။, အလိုအလျောက် Spreader, Cyclone Dust Proof Hopper, လိမ္မော်ခွံ အပိုင်းအစများကို ဖမ်းယူပါ။, ဟိုက်ဒရောလစ်ကွန်တိန်နာဖြန့်စက်, Spreader Beamlogistics, ထုတ်ကုန်အားလုံး